Alexandra Pereira: Simba, fashoni uye kurudziro. - Hanukeii
En Hanukeii tinokurudzirwa zuva nezuva nemararamiro uye mafashoni maitiro anoiswa munzira dzakasiyana dzekutaurirana. Makore mashoma apfuura, kugona kwedu kune kwakanyanya kukurudzira kwekupfeka uye zvishongedzo zvigadzirwa zvakaenda pamwe nemabhaisikopo pane hombe screen kana terevhizheni. Ikozvino, uye nekuda kwekuwanda kukuru uye kuwanda kwenzvimbo dzekudyidzana, ivo vefashoni vanokanganisa masocial network ndeimwe yeakanyanya mareferenzi ayo anowanzo kutarisirwa musati watora nhanho hombe yekugadzira muunganidzwa.
Panguva ino, isu tafunga kuongorora maitiro uye nhoroondo yemukadzi wechiGalician, aive iye akatibata. Tiri kutaura nezvaAlexandra Pereira, kana @LovelyPepa, seizvo vamwe vanowanzo muziva: Musikana ari nyore ane shungu nefashoni, anoisa parutivi nyika yemitemo, zvirevo uye zviyero zvemari, kutora danho mune izvo panguva iyoyo zvaiita kunge nyika isingazivikanwe zvachose, iyo bloggers.
Rwendo rwako ...
Chengeta bhurogu yemafashoni. Ndiani angafunga nezvazvo sechinhu chakanaka? Zvakanaka vanoti kunze uko kana ukasaedza hauzomboziva. Chokwadi ndechekuti, zvakatanga sediki bepanhau kwandakaburitsa pikicha neyekare mafirita epa Instagram, ayo anotidzosera ku2010 uko iwo mavara akazara egirini nemavignettes aive pamusoro penguva, nhasi yemawebhusaiti anonyanya kushanyirwa.
Chinyorwa mumasaiti eaya mafashoni uye masitayera akachengeterwa akakomberedza zviuru zvishanu euros uye zvibvumirano zvakagadziriswa nemhando dzakadai saHugo Boss, Dolce & Gabbana, Cartier pakati pevamwe, vanowana mari isingafungidzike. Millennial uye ine blog iro rinogashira mamirioni zviuru mazana maviri nemazana mashanu emwedzi, Alexandra Pereira akazvimisikidza semumwe wevanonyanya kukurudzira mafashoni muEurope, pamwe naChiara Ferragni naAida Domenech (Dulceida).
Akadzidza Mutemo neEconomics paUniversity yeVigo, Galicia. Nekudaro, kana zvasvika pakupfeka, aifarira kugadzira ake masitayera, ainyatsoziva mashandisiro aanofanira kuita pachiitiko chega chega, achigara achitsvaga nezve mafambiro uye kunyange kutaridzika kwaaiziva kuti kwaizokanganisa. Panguva iyoyo, Instagram yanga ichangozvarwa seapp yekugovana mafoto neshamwari uye kusvika kwayo sechishandiso chishandiso chaive chisingafungidzirwe. Asi Alexandra, aiona uye aiziva kuti kana akabatanidza blog yake ne Instagram, shamwari dzake dzinogona kutanga kushanyira peji rake.
Nezve 2013 yake blog "Anodakara Pepa" iye atosvika paavhareji yakati wandei yekushanya kwemwedzi, uko zvipfeko uye zvigadzirwa zvekushandisa zvakamutumira zvigadzirwa chero bedzi aizvikwidziridza, yaive panguva iyoyo apo Alexandra akaona kukosha kwekunge mufananidzo wake wave kuzova nebasa raakawira pamusoro pake, inomiririra mhando dzakasiyana. Chimwe chezviitiko zvakanakisa ndepaya paakaita mufananidzo wechiratidzo cheshangu, uyo akamubhejera semukurudzira ane zvemukati zviri nyore, zvine mutsindo uye zvinodhura. Kubudirira kwanga kuri zvekuti mukati memwedzi usati watanga mushandirapamwe, kambani iyi yakanga yatove nekatatu kutengesa kwayo.
Chokwadi chinonakidza, nei Lovely Pepa? Kana iwe uri mudikani wemhuka uye wakave uine chipfuwo, iwe unoziva kuti isu tinosarudza mazita avo nekuti isu tinotsvaga iyo inomiririra zvakanyanya nekuvazivisa. Zvakanaka, mune nyaya yaAlexandra, Lovely Pepa raive zita rechipfuwo chake, chiFrench Bulldog, uye ini ndinofunga izvo, pamwe nembwa yake, zita rake chairo raiburitsa iwo iwo maitiro uye hunhu, iro zita raakachengeta kwemakore uye nhasi chiratidzo chekupfeka chinozivikanwa nevose.
Uye maitiro ake?
Vanotaura kuti anonhuwirira akanakisa anouya mumabhotoro madiki. Kunyangwe, chimwe chinhu chakaita kuti Alexandra ave akaomarara kwemakore aive akareba. Muchokwadi, mukubvunzurudzwa Influencer akataura kuti akatambura makore akati wandei kudheerera kune vamwe vake vaunoda ivo vakaseka mita yake 1.60 yekukwirira. Zvinhu zvakawedzera kunetsa apo makore zvaaipfuura, Alexandra akaona kuti kutsvaga mbatya dzehukuru hwake kwaizonyanya kuoma.
Izvo zvaive zviripo apo, aine yakati rebei nguva yekuwedzera seyega maricho, akacherekedza kuti haasi iye ega, uye kuti vasikana vazhinji vanofanirwa kuenderana nehukuru hwevanhu vakareba vozopfuura nemugadziri wekugadzirisa zvipfeko. Saka akafunga nezve kugadzira rakapinza uye rakanakisa rembatya rekupfekedza vanhu vapfupi: Anodiwa Pepa Unganidzo.
Maitiro ake anomutsanangura se Mugwagwa Wemaitiro Chic. Isu takaona kuti Alexandra Pereira haana kuchinja izvi kubvira pakavambwa uye akagara achisimbisa kuti iwe unogona kutaridzika zvakanaka uchishandisa nguo dzechic dzakasanganiswa yakaderera mutengokutarisa kunoshamisa.
Anotungamira kunyaradzwa chic:
Denda iri pasina mubvunzo rakashandura zvese kumusoro, uye rakatokanganisa nyika yemafashoni. Muitiro wakagara pamba, uye kutenga mbatya dzekubuda kunze kunogona kunge kusiri munzira yekufamba. Saka kana kuenda kunotenga kwaive kutanga kwezuva, iwe unofanirwa kubuda nesitayera. Ndipo ipapo masitayera neumbozha zvadzikisira kurinda kwavo zvishoma uye fashoni yakashanduka, Confy Fashoni.
Alexandra aive mumwe wevatangi vekutanga kushinga kumisikidza baseball cap seyakakosha yezvinhu zvezuva nezuva, zvakasanganiswa nemablazers uye bhutsu dzemakumbo. Sekureva kwake, iyo parameter yakasimbiswa iyo makapeti ndeye chete kana zuva ranyura kana iwe uri kumahombekombe, inofanirwa kutyorwa zvishoma. Alexandra anozviratidza kuburikidza nechitarisiko chake, kwaanosanganisa fashoni yemitambo zvishoma, nehombodo uye tracksuit nekopu yake, zvichimuita kuti ataridzike, akasununguka, uye achiri mudiki.
Uye zvakare, chimwe chokwadi chinoshamisira nezve iye anokurudzira uye YouTuber ndechekuti akapinda muchirongwa cheMillennial fashoni yakarongedzwa naDolce & Gabanna, kwaakagovana catwalk naSofie Richie, Presley Gerber naKate Moss, chinhu chaasina kumbofungidzira kumashure muna2009. paaiita zvinyorwa zvekutanga pane yako blog.
Magirazi ezuva uye hunhu hwavo
Tichiongorora zvishoma maratidziro eiyi inokurudzira, takaona izvo zveese zvipfeko inokurudzirwa, usamborega chinhu chikuru chichienda chisingazivikanwe… Hongu! Magirazi ake ezuva. Muvhidhiyo yakatumirwa pamambure ake, iye mugadziri we Lovely Pepa inotiratidza kabhodhi yake: a kufamba muwadhiropu kurota chero munhu, asi zvakanyanya kukosha ndezvake mira yekutora magirazi, uko kune angangoita anodarika makumi mashanu magirazi. Crazy!.
Kwaari, chakakosha pakusarudza magirazi ake kuti ari nyore uye kuti anosanganiswa nezvose zvese zvaainazvo muwadhiropu yake. Zvakanaka, pamwe iwe une imwe kana imwe ine yekunakidzwa dhizaini, iyo inoshandiswa nechikonzero chakakosha, asi kazhinji ivo vese vanobata zvakafanana fomati: Dema kana tortoiseshell fizi magirazi, ane XXL akawedzera lenzi, uye mafuremu. katsi-ziso y shavishavi.
Zvaunoda? Magirazi ezuva ane pink yakajeka uye butterfly furemu, sedu Village Pink. Kune iyewo mugadziri, urwu rudzi rwemagirazi ezuva, asina kujairika, anoshandiswa neavo vari kutya. Asi kushinga mupfungwa, yekugara uine kuziva kumusoro, kwekutyora zvisaririra, zvekutsvaga zvitsva. Rudzi urwu rwegomo rwakamutendera kuti apedze zuva rakasununguka asi kwete kuenda risingazivikanwe. Uye zvakare, inoshanduka kuve mhando inochinja-chinja yemagirazi ayo anogona kusanganiswa nematoni ekupfeka kubva kune anodziya mapasuru kusvika kune iwo mutsvuku mutsvuku.
Imwe mhando yemagirazi atakaona kuti anokurudzira anokurudzira ndeaya: mhando nhema katsi-ziso, yakafanana chaizvo neyedu Pacific Nhema. Pasina kupokana Alexandra akanyatsojeka nezve kukosha kwekupfeka izvo 'Zvakareruka Basics'. Tinogona kuona kuti magirazi aya anomuperekedza chinenge zvese! Uye iko kudzikama, uye runako rwekushongedza kwavanounza kumeso kwake ndechimwe chezvikonzero zvikonzero nei tichitenda wekunyora mafashoni wandinoona mumagirazi aya.
Pasina kupokana, Alexandra anga ari kurudziro kuvasikana vazhinji vanoda kuve nemhando yake uye yakapfava sereferenzi. Kwatiri, zvirimo zvinotizadza nemazano ekuziva iwo manyorero churu chekusanganiswa kwemagirazi edu ezuva uye makapu. Uye zvakare kuti mifananidzo yake yenzendo uye zviitiko zvinotiratidza hupenyu hwehope. Wakazviwana sei?